GERMAN PANGUVA ZVAKO, VANHU VANHU VANHU
Muchidzidzo chino, tichaongorora zvisazitasingwi zveGerman. Izvo zvirevo zvemunhu zvatinoziva muchimiro cheGerman ini iwe uye isu iwe iwo iwo mazwi anoshandiswa zvinoenderana navo pachinzvimbo chemazita akakodzera kana akajairika.
Mazita echiGerman anowanzo kuve nyaya yemutsara, senge mune yedu Turkish. Naizvozvo, zvinodikanwa kuti udzidze zvisazitasingwi zveGerman. MuTurkey, zvisazitasingwi ndiwo mazwi ini, iwe, it, isu, iwe, ivo. Sezvo paine chirevo chimwe chete "o" muchiTurkey, izvo zvatiri kutaura nezvazvo ndezvevatatu vese, angave murume kana mukadzi kana murume.o”Tinoshandisa chirevo.
MuchiTurkey, tinoshandisa zvakare chisazitasingwi O chevanhu, tinoshandisa chisazitasingwi O chemhuka, uye tinoshandisa chisazitasingwi O chezvinhu zvisina hupenyu kana zvinhu. Asi mune zvirevo zveGerman, iro rakaenzana neshoko rekuti "o" rakasiyana nemazita echirume, echikadzi uye echikadzi. Semuyenzaniso; MuchiTurkey, tinogona kushandisa chisazitasingwi "o" kune zvese zvechirume nezvechikadzi uye nezvinhu zvisina hupenyu.
Semuenzaniso, pachinzvimbo chemutsara unoti "Ndiri kuona bhuku", tinogona kuti "Ndiri kuriona", tinogona kutaura izvi muchiGerman, asi mumutsara uyu "UN"Zvinoenderana nebonde rezvatinoreva nesabito." er-Si-es tinoda kushandisa chisazitasingwi chakakodzera. Kune mazita echirume echirume mumazita echiGerman emunhu er chirevo sie Chirevo chezita rezvebonde es chirevo.
Kana uchitaura nezvevanhu vamwe kana mazita akasarudzika er-Si-es Rimwe remazita rinoshandiswa. Mazita anoshandiswa kuvarume uye mataurirwo egadziriso anoshandiswa kuvakadzi. Semuenzaniso, Muharram, Omar, Samet nekuti iwo mazita evarume munzvimbo yavo er chirevo. Zeynep, Melis, Mary nekuti izita revakadzi munzvimbo yavo sie chirevo. Mazita anoshandiswa kune zvinhu zvisina zvepabonde. Mune mamwe mazwi; "er" rinoshandiswa pachinzvimbo chemazita ane chinyorwa, "sie" chinoshandiswa panzvimbo pemazita ane chinyorwa, "es" chinoshandiswa pachinzvimbo chemazita ane chinyorwa das. Sezvauri kuona, iko kushandiswa kwezita rekuti chiGerman pachako kwakati siyanei nekushandiswa kwemazita ekuti Turkish.
Muzvidzidzo zvedu zvakapfuura, takadzidza mitsara yedudziro yakapusa muchiGerman senge "iri ibhuku, iri tafura" uye maitiro ekuvaka mitsara. Izvozvi zvatave takadzidza mazita emunhu, ngatidzidze kugadzira mitsara yakadai sekuti "Ndiri mudzidzisi, iwe uri mudzidzi, iye chiremba" nenzira imwecheteyo. Mune mitsara iyi i-sen-u Mazwi acho munhu mumwe chete mataurirwo.
Shamwari dzinodikanwa, kana tikapfupikisa zvirevo zveGerman zvenguva pfupi, sezvinoonekwa pamusoro, chirevo cheGerman sie chine zvirevo zvakasiyana. Izvi zvinoreva kubva munzira yemutsara kana chiito conjugation nezvimwe. zvinogoneka kubvisa. Chinhu chakakosha ndechekuti iwe uzive uye udzidze aya mazwi izvozvi.
10. kirasi german nyaya inotaura9. kirasi german nyaya inotaura9. kirasi german chirevoChiGerman ndiri iwe ichoGerman lessonsGerman pronounschimiro chemunhu chimiro chiitochiGiriki chirevo chemunhu chidzidzochimiro chomunhu chirevochirevo chirevoGerman pronounszvirevo zvemagerman german
uccanatxnumx anodaro 9 apfuura
zeynep anodaro 8 apfuura
Bata Gülselin zvakananga anodaro 8 apfuura
supererogatory anodaro 6 apfuura
Kana Sie ikatanga neBig S (Kutendeseka Kwako - Yepamutemo)
Mustafa anodaro 4 apfuura
Bata Erif zvakananga anodaro 3 apfuura